Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A June 2011 (1)
Q and A June 2011 (1)
1. သမီးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်က လိပ်ခေါင်းဖြစ်ဖူး၊ ဖြတ်ဖူးပါတယ်။
2. ကျွန်တော် မြန်မာပြည်မှ ဆေးများ မှာယူတာ ရောက်ရှိလာပါပြီ။
4. I am working in overseas and I cannot type Myanmar font.
သမီးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်က လိပ်ခေါင်းဖြစ်ဖူး၊ ဖြတ်ဖူးပါတယ်။ အခု အိမ်သာတတ်တာ သွေးနဲ့အချွဲများ ပါလာနေပါတယ်။ အများကြီးမဟုတ်ပါ။ ဝမ်းသွားရတာလဲ မဝပါ။ အသားစလဲ ထွက်လာပြီး အိမ်သာပြီးလျှင် ပြန်ဝင်သွားပါတယ်။ ဘယ်ဖက် ရင်ခေါင်းရိုး အောက်နဲ့ ဘယ်ဖက်ခါးက အမြဲတမ်း နာနေပါတယ်။ ဘယ်ဘက် ဗိုက်တစ်ခြမ်းက ပူပြီးတင်းနေပါတယ်။ အစားနဲနဲ စားလိုက်တာနဲ့ ဗိုက်ကြီးက ပူလာပါတယ်။ ဘာစားစား နဲနဲ နာနာ နေပါတယ်။ လေတွေလဲ အရမ်းပွပါတယ်၊ ဝမ်းမချုပ်အောင်စား၊ ရေများများ သောက်သဖြင့် ဝမ်းမချုပ်သော်လည်း အမြဲလိုလို အိမ်သာသွားချင်နေတတ်ပါတယ်။ မေ့ပြီး ရေများများ မသောက်၊ ဟင်းရွက်အစားနဲတာနဲ့ ဝမ်းက တအားကို ချုပ်ပါတယ်။ ရေသောက်နဲတဲ့နေ့ နောက်နေ့ အိမ်ယာထလျှင် လည်ချောင်းနဲ့ ရင်ခေါင်းတစ်လျှောက်လုံး အရမ်းကို ခြောက်ကပ်နေတာ သာမန်လိုကိုမဟုတ်ပါ။ အရင်က လိပ်ခေါင်း ရှိခဲ့ဘူးပေမဲ့ ခုလို နေရထိုင်ရမသက်မသာ မဟုတ်ပါ။ သွေးရဲရဲများသာ ထွက်ပါတယ်။ ယခုအခေါက်ဖြစ်တာ ပိုထူးနေလို့ ဘာများဖြစ်တာပါလဲဆရာ။ ဘယ်လိုများ စစ်ဆေးရင် သိနိုင်ပါသလဲ။ ဆရာဝန်က ရှေ့နှစ်က စစ်ထားရင် ဒီနှစ် စစ်ဖို့ မလိုဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ ဒီလက္ခဏာတွေက ဒီနှစ်မှ ပိုပိုပြလာတာပါ။
ဓါတ်ပုံပို့ ပေးလိုက်ပါတယ်။ သမီးကို ဂဂျိုးဂဂျောင်လျောက်လုပ်နေတယ်လို့ မထင်စေချင်ပါ။ အရင်မိဘများနှင့်နေစဉ် မေမေ အမြဲ ဂရုစိုက်တာမို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ်ဂရုမစိုက်တတ်၊ ဘာဖြစ်နေမှန်းလဲ မသိသဖြင့် သူငယ်ချင်း ညွှန်ပြမှုဖြင့် ဆရာ့ ဆိုက်ကို တွေ့ရှိပြီး ဝမ်းသာအားရ မေးချင်၊ သိချင်သမျှတွေ မေးမိတာပါ။ ရိုင်းစိုင်းသွားလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ။ သမီးက ချူချာပါတယ်။ ဒီမှာက ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစနစ်မို့ သိပ်နားမလည်တော့ အားငယ်မိပါတယ်။ ပြီးတော့ တကယ်ကို နေရ ထိုင်ရ မကောင်းပါ။ ဘာဖြစ်နေမှန်း မသိလို့ ဆေးခန်းသွားတော့လဲ ဆရာဝန်များက ရောဂါ ရှာမတွေ့ဘူး ပြောပါတယ်။
ဂေါက်နေတာထင်လို့ စိတ်ဆရာဝန်နဲ့ စကားပြော၊ ဦးနှောက်ကို ဓါတ်မှန်ရိုတ်တော့လဲ အကောင်းပဲလို့ ပြောပါတယ်။ သမီး တကယ်ကို နေမကောင်းတာပါ။ ခုဆို မျက်လုံးတွေအမြဲ ဝေနေပြီး စာကောင်းကောင်းသင်လို့ မရတော့ပါ။ ဘယ်ဖက် နားကလဲ အောင့်နေပြီး လေထွက်နေသံကို ပြန်ကြားနေရပါတယ်။ ရင်ခေါင်းတွေ အောင့်ပါတယ်။ အစာအိမ် (သို့) အရိုးကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ယခုဓါတ်ပုံပါအတိုင်း နေမကောင်းတာကို ဆေးခန်းသွားပြတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးပြန်ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ သမီးစိုးရိမ်တာက အူကင်ဆာတို့ ဘာတို့ ဖြစ်နေတာများလားလို့ပါ။ ဘယ်လိုနဲ့များ သိနိုင်ပါသလဲဆရာ။ ဘာဖြစ်လို့ ရောဂါတွေထူနေတာပါလဲ။ အရင်လို ကျန်းမာအောင် ဘယ်လိုများလုပ်ရင်ရပါမလဲဆရာ။
• လိပ်ခေါင်းဆိုတာ ကုသပြီးနောက်ဖြစ်ဖြစ် ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ဖြစ်သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဘယ်လိုနေရ၊ စားရမလဲ သိပြီးသားမို့ မရေးတော့ပါ။
• ဓါတ်ပုံက မှန်ပါတယ် အပြင်-လိပ်ခေါင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ကုဘို့ လိုတယ်။ ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ကုသပါ။
• စိတ်ရောဂါလို့ နာမည်မတပ်ချင်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အားနည်းမှု၊ စိုးရိမ်မှုတော့ ရှိနေတာ သေခြာတယ်။
• ကိုယ့်ဖါသာပြင်တာနဲ့ အများကြီးသက်သာပါတယ်။ ပူပင်တာတွေ ဖါသာဖယ်ထုတ်ပါ။ အကောင်းမြင်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ယူပါ။ ဖန်ခွက်ထဲမှာ ရေတဝက်သာ ရှိတယ်လို့ မယူပါနဲ့။ ရေတဝက်ပြည့်တာလို့ မြင်ပါ။
• ရောဂါ၊ အခြေအနေ၊ ငါ့ထက်ဆိုးတဲ့သူတွေ အများကြီး ဆိုတာ အမှန်အတိုင်း မြင်ကြည့်ပါ။ ဆရာဝန်ကို သွားမပြနိုင်သူတွေ၊ ဆရာလိုတိုင်ပင်ဘို့ ဆရာဝန် မသိသူတွေ များလွန်းတာ သိပါ။
• မဟုတ်တာ (ဥပမာ ကင်ဆာ) အတွက် ကြိုတင် ကြောင့်ကျမနေပါနဲ့။ စစ်ဆေးတဲ့ဆရာဝန်က ကောင်းတယ် ဆိုတာကို လက်ခံနိုင်အောင် လုပ်ပါ။ သူငယ်ချင်းချင်း အားပေးတဲ့ လောကွတ် စကား မဟုတ်ပါ။ ပညာရှင်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ် ဖြစ်ပါတယ်။
• စိတ်ဖိစီးမှု လူတိုင်းမှာ ရှိတယ်။ နေတတ်အောင် နေကြရတယ်။ ဆရာ့ဆီကို ဒိထက် ရောဂါဆိုးဝါးသူတွေ တပုံကြီး မေးကြ ရေးကြတယ်။ ကိုယ်တိုင် HIV ဖြစ်သူ၊ ယေက်ျားမှာ စီပိုး၊ မိန်းမှာ ဘီပိုးရှိသူ၊ အဖေမှာ နှလုံးရောဂါ ဆိုးနေသူ၊ အမေက လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်း များနေသူ၊ သူ့ကလေးမှာ ကုမရတဲ့ မွေးရာပါရောဂါ ရှိနေသူ၊ လွန်ကြွံမိလို့ ဖျက်ချင်သူ၊ စော်ကားခံရလို့ ကိုယ်ဝန်ရှိလာသူ၊ စုံလို့ပါဘဲ။ လိပ်ခေါင်းထက်ကြီးတဲ့ ဆင်ခေါင်းတွေလေ။
• ခံစားနေတာ မှန်သမျှ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြတာ၊ ဆရာ့ဆီကို မေးရင်း ရေးတာဟာလဲ စိတ်ကုသနည်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် မြန်မာပြည်မှ ဆေးများ မှာယူတာ ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ဆေးများကတော့ -
၁။ Loritab 10 (LORATADINE TABLETS USP)
၂။ Medomox 500 (AMOXICILLIN CAPSULES BP)
၃။ Flixonase (Aqueous Nasal spray) ဆေးများ သုံးစွဲပုံလေး အကြံပေးစေလိုပါတယ်။
• Loratadine ဆေးကို Claritin နာမည်နဲ့လဲ လာတယ်။ ဆေးလက်မှတ် မလိုတဲ့ဆေး ဖြစ်တယ်။ (အလာဂျီ) လက္ခဏာတွေအတွက် ပေးတယ်။ နှာရည်ယိုတာ၊ ယားယံတာ၊ မျက်ရည်ကျတာ၊ နှာချေတာ၊ နှာခေါင်း-လည်ချောင်း အနေရခက်တာ၊ အင်ပြင်ထတာ။ ဆေးတောင့်၊ ဆေးရည်၊ ဆေးပြားနဲ့ လာတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ခေါင်းမူး၊ အိပ်ချင်၊ ခေါင်းကိုက်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ချောင်းဆိုး၊ အားယုတ်၊ အစာမကျေ၊ ပျို့-အန်၊ အိပ်ပျော်ဘို့ခက်၊ ဆိုတာတွေက သိပ်မဆိုးတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ခေါင်းသိပ်မူးတာ၊ ခြေ-လက်တုံတာ၊ ဆီးသွားရ ခက်တာ၊ ရင်ပတ်နာတာ၊ တက်တာ၊ စိတ်မူပြောင်တာ၊ နှလုံးခုန်-မမှန်-မြန်တာ၊ ဆေးနဲ့ မတည့်တဲ့ (အလာဂျီ) လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာတာတွေက ဆိုးဝါးတာတွေ ရှားရှားပါးပါး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူ၊ အသဲ-ကျောက်ကပ် မကောင်းသူတွေကို အထူးသတိနဲ့ ပေးရတယ်။
• Flixonase aqueous nasal spray နှာခေါင်းထဲ ပန်းရတဲ့ဆေးထဲမှာ fluticasone propionate ဆေးပါတယ်။ Corticosteroid စတီရွိုက်ဆေးမျိုးဖြစ်တယ်။ နှာခေါင်းရောင်တာအတွက်သုံးတယ်။ အတိအကျဆိုရင် Allergic rhinitis ခေါ်တာ၊ Hayfever ခေါ်တဲ့ရောဂါအတွက်သုံးရတယ်။ နှာရည်ယိုတာ၊ ယားယံတာ၊ မျက်ရည်ကျတာ၊ နှာချေတာ၊ နှာခေါင်း-လည်ချောင်း အနေရခက်တာတွေ ဖြစ်တာကို ပြောတာ။ တာရှည်သုံးတာ များရင် အရိုး အားနည်းစေတယ်။ ဆိုင်းနပ်စ် ပိုးဝင်တာပါရှိနေရင် ပိုးသေဆေးနဲ့ တွဲရမယ်။ ၄ နှစ်အောက်ကလေး မပေးဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ နို့တိုက်ချိန်သုံးတာ သတိထားပါ။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = နှာခေါင်းသွေးယိုတတ်တယ်၊ နှာခေါင်းခြောက်သွေ့ပြီး အနေရခက်တတ်တယ်၊ ခေါင်းကိုက်၊ နှာခေါင်း အနံ့မကောင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။
• Amoxacillin ဆေးဟာ ပဋိဇီဝဆေးဖြစ်တယ်။ ပနယ်စလင် နဲ့ တူပေမဲ့ Gram-negative ပိုးတွေအတွက် ပိုကောင်းတယ်။ နားရောင်တာ၊ ဆီးအိမ်ရောင်တာ၊ နူမိုးနီးယား၊ ဂနိုရီးယား၊ E. coli or Salmonella ပိုးဝင်တာတွေကို ပေးတယ်။ အစာလမ်း (အူ) ရောင်ခြင်း၊ နားအလည်ပိုင်း (အင်ဖက်ရှင်)၊ (ဆိုင်းနပ်စ်)၊ ဆီးလမ်း-ကျောက်ကပ်-နှလုံးသား-အာသီး-လေပြွန်-သည်းခြေလမ်း ရောင်ခြင်း၊ သွေးထဲ ပိုးရောက်ခြင်း၊ အရေပြား အနာတွေအတွက် ပေးတယ်။ နောက်ပြီး Clarithromycin နဲ့တွဲပြီး Helicobacter pylori ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အစာအိမ်လေနာအတွက်လဲပေးတယ်။ ဒီလိုဖြစ်သူတွေကို Lansoprazole ဆေးပါတွဲသေးတယ်။ Meningitis, Bacteremia, or Endocarditis ဖြစ်ရင်င် IV ပေးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ ပျောက်သွားတာသာမက ဆေးပါတ် လည်အောင် ပေးရမည်။ အစာနဲ့ နီးနီး ဝေးဝေး သောက်နိုင်တယ်။ 250 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်။ ၄ ရက်ကနေ ၁၄ ရက်အထိ ရောဂါလိုက်ပေးတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ = ဝမ်းအရည်သွား၊ ဆီး သွားရခက်၊ သွေးယို၊ အားယုတ်၊ ဆီး-အသားအရေ-မျက်လုံးဝါ၊ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်၊ ဗိုက်အောင့်၊ အိပ်မရ။ ရင်ဘတ်ပူ၊ ပျိူ့၊ အန်၊ အိပ်မပျော်၊ စိတ်မကြည်၊ ဗိုက်အောင့်၊ သွေးယို၊ ဆီးနည်း၊ မွေးလမ်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း၊ မှက်ခရု၊ Methotrexate, Sulfa drugs, Tetracycline ကိုယ်ဝန်တားဆေးတို့နှင့် တွဲမပေးသင့်။ Ampicillin, Dicloxacillin, Oxacillin, Penicillin တွေနဲ့ တွဲမပေးရပါ။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးရဲ့ သတ္တိကို နည်းစေတတ်တယ်။ ဆေးနဲ့မတည့်ရင် အင်ပြင်ထွက်၊ အသက်ရှူခက်၊ မျက်နှာ-နှုပ်ခမ်း-လျှာ-လည်ပင်းရောင်၊ ကိုယ်ပူ၊ ချမ်းတုံ၊ မူးဝေ၊ အသက်ရှူခက်၊ ဆီးနီ၊ တက်တာဆိုရင် အရေးတကြီး ကုသရမယ်။
အရေပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်လို့ပါ။ ကျွန်မလက်ထိပ်မှာ အရေကြည်ဖုလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ပေါက်သွားလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ လက်ချောင်းတိုင်းမဖြစ်ဘူး ဘယ်ညာလက်မလက်ညှိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ညာဘက်က အဖြစ်များပါတယ်။ ခြေထောက်လဲ အဲလို ၂ ချောင်းပဲဖြစ်တယ်။ ညာဘက်အဖြစ်များတယ်။ အရေပြားအထူးကုနဲ့ပြတော့လဲ မထူးဘူး။ ခနသက်သာတယ် ပြီးရင်ပြန်ဖြစ်တယ်။ နီကယ်လ် alleigic လို့ပြောပေမယ့် အဲဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကြည့်တော့ မတူဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပထမရက်မှာ အရေကြည်ဖုသေးသေးလေးတွေ အများကြီးမြင်တယ်။ နောက်ရက်ဆိုရင် နဲနဲပြူးလာတယ်။ ပြီးရင်ပေါက်သွားတယ်။ ခနခနအဲလိုဖြစ်တယ်။ တခါထဲအမြစ်ဖြတ်ပျောက်ချင်တယ်။
• ဖြစ်နိုင်တာ ၂ မျိုးရှိတယ်။ (၁) ရေယုံ နဲ့ (၂) မတည့်လို့ဖြစ်တဲ့ အနာ။ မတည့်တာကနေဖြစ်ဘို့များတယ်။ ပြန်ပြန်ဖြစ်နေလို့ပါ။ ကြာရင် နှင်းခူနာ သဘောဘက် ရောက်လာနိုင်တယ်။
• မတည့်တာ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ လက်နဲ့ခြေတွေနဲ့ ထိ-ကိုင်တာ တခုခုဖြစ်မယ်။ ဆပ်ပြာ၊ အလှသုံးပစ္စည်း၊ အဝတ်အစား၊ အစားအသောက်နဲ့ ရာသီဥတု တခုခု ဖြစ်မယ်။ တခုမကဘဲလဲ တွဲမတည့်တာ ရှိသေးတယ်။
• မတည့်တာသိရင်ရှောင်ပါ။ တခါတလေ မသိပါ။ ရှောင်လို့ ခက်တာလဲ ရှိတယ်။
• ရက်တိုဆို တမျိုး၊ နာတာရှည်ဆို တမျိုး ဆေးပေးမယ်။
• Calamine lotion ဆိုတာက အပြော့ဆုံး လိမ်းဆေး၊
• Antihistamine ဥပမာ Citrizine စားဆေး သောက်နိုင်တယ်။ ပြန်ဖြစ်နေရင်၊ ကြာနေရင် (ကော်တီဇုန်း) ပါတဲ့ လိမ်းဆေး လိမ်းရတယ်။ နာမည်တွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ နာတာရှည်သမားတွေကို (ကော်တီဇုန်း) စားဆေးပါ ရက်သိပ်မကြာဘဲ ပေးမယ်။ ထပ်ဆင့်ဖြစ်လာတဲ့ ပိုးဝင်တာ ရှိနေရင် ပိုးသေဆေး လိုမယ်။ စားဆေး နဲ့ လိမ်းဆေး။ ကော်တီဇုန်း နဲ့ ပိုးသေဆေး တခါထဲ ရောထားတာလဲ ရှိတယ်။ လိုမယ် ထင်ရင် ဖြစ်တဲ့နေရာကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ပို့နိုင်ပါတယ်။
Jun 15, 2011 at 12:54 PM
I am working in overseas and I cannot type Myanmar font. I am just married and using Marvelon 28 to prevent pregnant. Now I am confused the usage of this pills.
• ကိုယ်ဝန်တားထားဘို့အတွက် တနေ့ ၁ လုံး ၂၁ ရက်သောက်ပါ။
• ၂၁ လုံးကုန်တဲ့နောက်မှာ အရောင်မတူဆေး ၇ လုံးကိုလဲ တရက် ၁ လုံး ဆက်သောက်ပါ။
• ပဌမဆုံး သောက်တဲ့နေ့ဟာ ရာသီ စလာတဲ့နေ့ ဖြစ်သင့်တယ်။
• မေ့လို့ တရက်ကျော်သွားရင် တခါထဲ ၂ လုံးသောက်ပါ။ ပြီးတော့ တရက် ၁ လုံးဆက်သောက်ပါ။
• ရာသီလရဲ့ ပဌမ ၂ ပါတ်မှာ ၂ ရက်မေ့တာဆိုရင် သတိရတဲ့ တတိယမြောက် နေ့မှာ ၂ လုံး၊ စတုတ္ထနေ့မှာလဲ ၂ လုံး သောက်ပါ။ နောက်ရက်တွေမှာ တရက် ၁ လုံးသာ ပုံမှန် ဆက်သောက်ပါ။
• ရက်ကျော်သွားမိတဲ့ရက်နောက် ၇ ရက်အတွင်းမှာ၊ လင်မယားအတူနေရင် (ကွန်ဒွမ်) ပါသုံးပါ။
• ဆေးသောက်ဘို့ ၂ ရက် မေ့သွားတာက တတိယပါတ်ထဲမှာဖြစ်နေရင် ဆေးပိုမသောက်ဘဲ တရက် ၁ လုံးသာ ဆက်သောက်ပါ။ ဆေးကပ်ကုန်ရင် အသစ်ဆက်သောက်ပါ။
• ဆေးသောက်ဘို့ ၃ ရက်ဆက်တိုက်ကျော်သွားရင် ဘယ်ရက်သတ္တပါတ်မှာဖြစ်ဖြစ် ဆေးစသောက်ဘို့ မမေ့အောင် သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ဟာ ဥပမာ တနင်္ဂနွေဆိုရင် စနေနေ့အထိသာ တရက် ၁ လုံး သောက်ပြီးတဲ့နောက် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အသစ်ဆေးကပ်စသောက်ပါ။
• အဲလို ပုံမှန်မဟုတ်ဖြစ်သူတွေ မှားတဲ့နေ့ကနေ နောက်ထပ် ၇ ရက် (ကွန်ဒွမ်) ကိုပါသုံးပါ။
• Marvelon 28 ထဲမှာ desogestrel 0.15 mg and ethinyl estradiol 0.03 mg တွေပါတယ်။
• သွေးကြောပိတ်ရောဂါရှိသူ၊ (စထုပ်ခ်) ရဘူးသူ၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ဘူးသူ၊ သွေးကြောကျဉ်းရောဂါရှိနေသူ၊ အသဲရောဂါရှိနေသူ၊ အသဲကင်ဆာရှိနေသူ၊ ရင်သားကင်ဆာရှိနေသူ၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းမသိဘဲ ရာသီသွေးဆင်းများနေသူ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနေသူတွေ ဒီဆေးမသောက်ရပါ။